सुहाउँदो कला संस्कृति हुनुपर्छ « Loktantrapost
१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार १३:०१
निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो वार्षिकोत्सव धुमधामका साथ मनाउने गरेका छन् । वार्षिकोत्सवलाई थप रौनक दिन गीत, सङ्गीतको प्रयोग बाक्लै हुने गरेका छन् । तर, कतिपय विद्यालयमा कला संस्कृति भड्किलो हुने गरेको गरेको छ । समाजमा नसुहाउँदो गीत सङ्गीतमा विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । विद्यालय दोस्रो घर पनि हो । विद्यार्थीले ज्ञान आर्जन गर्ने सवालमा पहिलो घरकै रुपमा विद्यालयलाई लिने गर्दछन् । त्यसैले यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दा समाज सुहाउँदो हुनुपर्छ ।
कला संस्कृति समाजको प्रतिबिम्ब हो । कला संस्कृतिले समाजमा जे कुरा छ, त्यसलाई प्रतिबिम्बित मात्र गर्दैन, समाजलाई कुन दिशातिर लैजाने त्यसका लागि पनि सहयोग गर्छ । समाजको प्रतिबिम्ब वा समाज रुपान्तरणको माध्यम दुबै नमानेर गीत, सङ्गीत, कलालाई सीर्फ मनोरञ्जनको साधनको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मत पनि समाजमा नभएको होइन । तर, यी सबै मान्यताका पछाडि आ–आफ्ना तर्क पनि होलान् । तर पनि गीत, सङ्गीत, कला मानिसको संवेगात्मक भावनासँग जोडिएको पक्ष भएकाले यिनीहरुको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु नै समाजका लागि हितकर हुन्छ ।
मानिसको संवेदनासँग जोडिएको गीत, सङ्गीत, कला र शिक्षाबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? वा, शैक्षिक क्रियाकलापमा अहिले यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भइरहेको छ ? यी खासै बहसमा नल्याइएका तर संवेदनशील प्रश्न हुन् । किन संवेदनशील हुन् भने भोलिको समाज कस्तो बनाउने भन्नेतर्फ चिन्तन गर्ने हो भने आजका विद्यार्थीतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अर्काेतिर विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिलाई सार्थक बनाउन र विद्यार्थीलाई सही दिशामा अघि बढाउन पनि यो जरुरी छ ।